ဘာကြောင့် Hodges တက္ကသိုလ်ဟာထူးခြားတဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Florida?
ဒေါက်တာ Meyer နှင့် Hodges တက္ကသိုလ်နှင့်တွေ့ဆုံပါ
Hodges တက္ကသိုလ်၏ဥက္ကumn္ဌအဖြစ်သာမက၎င်း၏ဥက္ကpresident္ဌအနေဖြင့်လည်းဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတက္ကသိုလ်သို့သင့်အားကြိုဆိုရန်ကျွန်ုပ်သည်အရည်အချင်းပြည့်မီသည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေသဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုထားသောပုဂ္ဂလိကအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မူလက ၁၉၉၀ တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအနောက်တောင်ဖလော်ရီဒါတွင်ဂုဏ်ယူစွာအမှုဆောင်နေသည်။ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ရှိ Fort Myers နှင့် Naples ရှိကျောင်းဝင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင် - ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုအသိုက်အ ၀ န်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသည်အစဉ်အလာအားဖြင့်ကျောင်းဝင်းလမ်းညွှန်သာမကအွန်လိုင်းသင်တန်းများနှင့်အစီအစဉ်များပါ ၀ င်သည်။
Hodges တက္ကသိုလ်သည်ဒေသတွင်းရှိအခြားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်မတူဘဲသင်ကြားရေးပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပေးသည်။
လက်မှတ်၊ တွဲဖက်၊ ဘွဲ့နှင့်မဟာဘွဲ့အစီအစဉ်များ၊
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်များစွာသည်သူနာပြုများ၊ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင်နှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးအကြံပေးခြင်းစသည့်နယ်ပယ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အချင်းပြည့်မှီစေရန်ကူညီသည်။ အခြားသူများကစက်မှုလုပ်ငန်းအသိအမှတ်ပြုမှုဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြ။ စစ်မှုထမ်းဟောင်း၊ တက်ကြွသော ၀ န်ထမ်းများနှင့်သူတို့၏မိသားစုများသည် Dr. Peter Thomas စစ်ပြန် ၀ န်ဆောင်မှုစင်တာမှတစ်ဆင့်ပညာရေးရည်မှန်းချက်များနှင့်အကူအညီများရနိုင်သည်။
Hodges တက္ကသိုလ်သည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုဒုတိယဘာသာစကား (ESL) အဖြစ်ပြီးပြည့်စုံသောအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်လည်းသင်ကြားပို့ချပေးပြီးအင်္ဂလိပ်စာကိုပိုမိုကျွမ်းကျင်လိုသောအင်္ဂလိပ်စာမတတ်သူများအားနှစ်မြှုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ESL ကျောင်းသားလူ ဦး ရေတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၂၅ ခုကျော်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်။
Hodges တက္ကသိုလ်၏ရပ်ရွာအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်ပါ ၀ င်မှု
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနောက်တောင်ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်အတွက်အရေးပါသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားများအတွက်အဆင့်မြင့်ပညာရေးကိုရရှိရန်နှင့်ကျယ်ပြန့်သောစီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိတ်ဖက်များအဖြစ်တုန့်ပြန်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကောင်းမွန်သောရပ်ရွာထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အခန်းကဏ္roleကိုဂုဏ်ယူသည်၊ တိုးတက်လာသောဒေသတွင်းလုပ်သားအင်အားကိုကျွမ်းကျင်ပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများကိုကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်လက်ကတိက ၀ တ်ပြုမှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းသည်အနောက်တောင်ဖလော်ရီဒါသို့အစေခံနိုင်သည့်အခြားနည်းလမ်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ရှာဖွေသည်။
အခြားအဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားသီးခြားစီရှိသော Hodges တက္ကသိုလ်မှကမ်းလှမ်းရန်နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အားလုံးကိုလေ့လာရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ဒီတက္ကသိုလ်ကဘာတွေကမ်းလှမ်းပေးသလဲဆိုတာကိုခင်ဗျားသဘောကျမှာပါလို့ငါယုံကြည်တယ်။
ဂျွန် D. Meyer, DBA
Hodges တက္ကသိုလ်၏မစ်ရှင်, ရူပါရုံနှင့်တိုင်
ပုဂ္ဂလိကအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Hodges တက္ကသိုလ်သည်ကျောင်းသားများအား၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်လူထုကြိုးပမ်းမှုများတွင်အဆင့်မြင့်ပညာကိုအသုံးပြုရန်ပြင်ဆင်သည်။
Hodges တက္ကသိုလ်သည်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာပါ ၀ င်မှုအားလုံးပါ ၀ င်သည့်ပညာရေးနှင့်ရပ်ရွာပူးပေါင်းပါ ၀ င်မှုအတွက်ထူးချွန်မှုအတွက်အသိအမှတ်ပြုခံရလိမ့်မည်။
ရပ်ရွာနှင့်အလုပ်ရှင်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် Hodges ၏ထုတ်ကုန်အစုစုကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။
အရည်အချင်းပြည့်ဝသော၊ ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်သားအင်အားကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ချင်းစီ၏ကောင်းမွန်သောသက်ရောက်မှုများကိုတိုးမြှင့်ခြင်း။
ကျောင်းသားများနှင့်အခြားပါ ၀ င်ပတ်သက်သူများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအရည်အသွေးတိုးတက်စေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တိုးတက်မှုများကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ။
ကျောင်းသားများ၊ ဆရာများ၊ ၀ န်ထမ်းများ၊ ကျောင်းသားဟောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်မှသူငယ်ချင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်ပိုမိုထိရောက်စွာဝေမျှရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုအကျိုးပြုသည့်သက်ဆိုင်သူများနှင့်မိတ်ဖက်ပြုခြင်းဖြင့်အစပြုလုပ်ဆောင်မှုများကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ။
ကျောင်းသားများပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အတွက်ဆန်းသစ်သောနည်းလမ်းများကိုတီထွင်ရန် Hodges တက္ကသိုလ်၏အတွေ့အကြုံသည်ပိုမိုကျယ်ပြန်၊
အဖွဲ့အစည်း၏ sphere ဇာလွှမ်းမိုးမှုနယ်ပယ်ကိုချဲ့ထွင်ရန် Hodges ၏တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ကွန်ယက်ကိုအားကောင်းအောင်လုပ်ပါ။
အဖွဲ့အစည်းအားထောက်ပံ့ရန်အတွက်ပြင်ပ ၀ င်ငွေရင်းမြစ်အသစ် (ပညာသင်ဆု၊ ထောက်ပံ့ငွေ၊ အရင်းအနှီးစီမံကိန်းများအတွက်အထောက်အပံ့) အသစ်ကိုလုံခြုံအောင်ထားပါ။
၂၀၂၁ အတန်းအစား (၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်သည်)
Gillian Cummings-Beck၊ အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဒါရိုက်တာ၊ တေလာ Morrison
ဂျယ်ရီအက်ဖ်နီကိုးလ်စ်၊ အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဌ၊ ဘရောင်းနှင့်ဘရောင်းအကျိုးခံစားခွင့်များ
မိုက်ကယ် Prioletti, အကြီးတန်းဒုဥက္ကPresident္ဌ Robert W. Baird & Co, Inc.
ပိုင်ရှင် / သမ္မတ၊ Gerard A. McHale, Jr.
Tiffany Esposito, SWFL, Inc ၏ဥက္ကဌနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်
ပုဂ္ဂလိကစီမံခန့်ခွဲမှုအတိုင်ပင်ခံ Leslie H. King III
Marisa Cleveland, Ed.D. , အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ၊ Seymour Agency
Marilyn Santiago၊ Partner / CMO Creative Architectural Resin Products, Inc.
Dianne Hamberg, ဒုတိယဥက္ကPresident္ဌနှင့်ဌာနခွဲခေါင်းဆောင် BB&T ယခု Truist
ဂျွန် Meyer သမ္မတ
Erica Vogt, အတွင်းရေးမှူးနှင့်ဘဏ္asာရေးမှူး